Monday, 8 Jan, 2018 3:33 PM
प्रदेशको राजधानी तोक्ने काम यति पेचिलो बनेको छ कि सरकार यो संवैधानिक दायित्वबाट पन्छने कोसिशमा लागेको देखिन्छ । उता प्रदेश राजधानीको माग राख्दै विभिन्न स्थानमा आन्दोलन चर्किन थालेका छन् । एक सातायता प्रदेश राजधानीकै विषयमा धनकुटा आन्दोलित बनेको छ । प्रदेश नं १ को राजधानी बनाउनुपर्ने माग राख्दै धनकुटावासी आमहड्तालमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनको नेतृत्व नवनिर्वाचित एमाले प्रतिनिधिसभाका सांसद राजेन्द्र राईले गरिरहेका छन् । आन्दोलनका अगुवा राईसँग न्यूजसेवाले गरेको कुराकानी :
प्रदेश राजधानी तोक्ने जिम्मा प्रदेश सभाको हो । प्रदेश सभा गठन नै भएको छैन । अहिले नै हामीले भनेकै ठाउँमा प्रदेश राजधानी तोकिनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्नुको कुनै औचित्य छ र ?
यो आन्दोलन त जायज छ नि ! आफूले खाइपाइ आएको कुरो गुम्न लागेपछि के गर्ने त ? प्रदेश नं १ का १४ जिल्लामध्ये धनकुटा नै ‘सेन्टर’मा छ । हावापानी पनि राम्रो छ । भौतिक पूर्वाधार पनि छ । जग्गा जमिन राम्रो भएको, मध्यपहाडी लोकमार्गबाट ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर र सोलुखुम्बुसँग सडक सञ्जाल भएको उचित ठाउँ हो । यहाँका जनताले उठाएको आवाज ठिक हो । यसमा हाम्रो समर्थन छ । त्यसको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले गरिरहेको छ ।
यतिका बर्षसम्म धनकुटा पूर्वको मुकाम बन्यो, अब अरु ठाउँलाई पालो दिँदा राम्रो हैन र ?
पालो दिने त ठिकै हो । अब पालो दिँदा कहाँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि त ख्याल गर्नुप-यो । प्रशासनिक रुपमा सेवा दिँदा कुन ठाँउमा सजिलो हुन्छ भन्ने पनि सबैले बुझ्न जरुरी छ । धनकुटाबाहेक अन्यत्र कहीँ पनि उपयुक्त र सम्भव छैन । विराटनगरमा हे¥र्यौं भने बर्खामा पानी आएर चुर्लुम्मै डुब्छ । अहिले हुस्सु आएर सास्ती छ । विराटनगर आफैँमा व्यापारिक केन्द्र हो । त्यहाँका जनता आफैंमा सक्षम छन् । त्यहाँ विकास छ । त्यसकारण पहाड राजधानी बनाउनु पर्दछ । धनकुटा विराटनगरको तुलनामा पछाडी छ । अब इटहरीलाई हेर्ने हो भने यो आफैँमा ठूलो शहर बनिसक्यो । किन चाहियो त्यहाँ प्रशासनिक क्षेत्र ? अहिले उपयुक्त ठाउँ धनकुटा हो, यो भन्दा अर्को विकल्प छैन ।
भर्खरै जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित हुनु भएको छ । सपथ पनि लिइसक्नु भएको छैन । अहिले नै बन्द हडतालमा उत्रनु भयो । काम को पहिलो सुरुवात नै बन्द हड्तालबाट भयो अलिक असजिलो महशुस भएको छैन ।
आन्दोलन ले त जनता खुसी पो छन् ! यो जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्ने रहेछ । हाम्रा नेताहरु ठिक रहेछन् भन्ने कुरा गर्छन् यहाँका जनता । किनभने, हाम्रो हक–अधिकार सरकारले खोस्न आँट्यो, परिस्थितीलाई ठिक ठाँउमा ल्याउन नेताहरु लागिपरेका छन् भन्ने बुझाई छ जनतामा । तपाईं अगाडि बढ्नुहोस्, नेतृत्व गर्न प¥यो भनेर जनताले मलाई भनेकाभन्यै छन् ।
बिभिन्न मन्त्रालय बनाएर बोर्ड पनि टाँग्नु भो, यस्ता कामले अराजकतालाई बढवा दिँदैन ?
हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छेहरु, हामी अराजकताको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । यो दवावमुलक आन्दोलन हो । अहिलेको काम चलाउ सरकारलाई संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम तत्काल अस्थायी राजधानी तोक, ढिलासुस्ती नगर, यसले गर्दा जनतालाई अन्यौलनमा नपार भनेर दवाव दिन यो आन्दोलन गरेको हो । यहाँका मानिस सचेत छन् । आन्दोलनलाई राम्रो ढंगले व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्छन् ।
तपाईंहरु जस्तो विराटनगरका जनता पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अनशनमा बसेका छन् । विराटनगवासीले पनि तपाईंहरुले जस्तो आम हड्ताल गरे भने त्यो बेला के हुन्छ ?
विराटननगरका साथीहरुले किन त्यस्तो गर्नुप-यो ? त्यो आफैँमा विकास भएको ठाउँ हो । ठूलो शहर हो । त्यहाँका मानिसहरुले यसपटक धनकुटालाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु । उहाँहरुले हामीहरुलाई ‘सपोर्ट’ गर्नुहुन्छ ।
झापा, मोरङ, सुनसरी र इलामका एमालेकै सांसदहरुले विराटनगरलाई प्रदेश राजधानी बनाउनु पर्ने भनेर लविङ गरिरहनु भएको छ । तपाईंहरु धनकुटा भन्दै हुनुहुन्छ । एउटै पार्टीभित्र पनि किन एकमत हुन नसकेको ?
यो राजनीतिक निर्णय होइन । प्राविधिक निर्णय हो । यसमा पार्टीको निर्णय आवश्यक छैन । जनताले जे भन्छन् पार्टीले त्यही गर्ने हो । मलाई अरु जिल्लाका साथीहरुले अगाडि बढ्नुहोस् हामी साथ दिन तयार छौं भन्नुभएको छ । म प्रदेश सभाको सांसद नभए पनि धनकुटावासीको हैसियतले यो आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छु ।
त्यसो हो भने प्रदेश सभाको निर्णय तपाईहरुलाई मान्य हुन्छ ?
धनकुटाबाहेक अन्यत्र निर्णय हुँदैन, हामी मानिहाल्छौ नि !
संघीयता कार्यान्वयको चरणमा छ । प्रदेशको मुकामकै लागि यत्रो हानथाप भइरहेको छ । यी सबै घटनाक्रमलाई हेर्दा कतै संघीयता नै हाम्रो कलहको बिज बन्ने त होइन ?
हामी यसलाई संस्थागत गर्ने काममा पो लागिरहेका छौं त । यसले संघीयतालाई कुनै अप्ठ्यारो पार्दैन । हामीले भन्यौं, धनकुटामा प्रदेश राजधानी राखियो भने विकासको न्यायोचित वितरण हुन्छ । सेवा–सुविधा पु¥याउन पनि सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यता राखेर हामीले दवावमूलक कार्यक्रम राखेको हो । यसले संघीयतालाई नै कसरी हानी गर्ला र ? सबैतिरबाट आएका कुरालाई बुझेर निर्णय गर्न झन सजिलो हुन्छ ।